Zavakanto sy decolonisation - Afrikhepri Fondation
Zavakanto sy fanaparitahana
Lmaniry ny hahatsapa ho "tsara amin'ny tenako" izy ary ho faly hiaina no antony nanosika ahy hiditra amin'ny famakafakana. Ity fanjakana ity dia fantatro tany amin'ny fireneko, ny Côte d'Ivoire, izay navelako tamin'ny faha-13 taonako, hanohizako ny fianarako tany Frantsa. Very aho, ity toetry ny fahasalamana ity, taorian'ny 3 taona nipetrahako tsy lavitra ny fianakaviako ary te-hahita azy indray aho amin'ny vidiny rehetra.
Rehefa avy nandehandeha nitady vahaolana tsy misy tohiny miaraka amin'ireo dokotera aho, ny aretin-tsaina, hita tao amin'ny kilasin'ny filozofia sy ny oniversite, dia nanery ahy.
Fotoam-pifaliana teo amin'ny fandriam-bady Dokotera Faladé, nahafaly ny miresaka malalaka momba ny olana atrehiko ho an'ny reny mpisolo toerana izay nihaino tamim-pitandremana sy tamim-pitandremana.
Tsy maintsy lazaiko fa nahafa-po ny zavatra niainako tamin'ny fitsaboana ara-pahaizana. Ary tamin'ny faran'ny famakafakana nataoko, dia niasa tsara aho hahafantatra fa nahatratra ny tanjona napetrako ho an'ny tenako.
Nisy zavatra nanohy nanelingelina ahy anefa. Agoraphobia izay nipoitra tsindraindray tamin'ny fotoan'ny havizanana ary nahatsiaro ho naratra aho noho ny tsy fahaizako. Toa hitako fa ity phobia ity dia zavatra tsy azon'ny sain'ny kabary sy ny eritreritra. Zava-mahatalanjona izay noheveriko ho toy ny fako velona, ​​korontam-batana avy am-boalohany, tarantula mainty eo afovoan'ny fiainako, izay nanjary lozabe indrindra rehefa irery aho niaraka taminy, tao amin'ny habakabaka malalaka.
Tsy iray amin'ireo "tonga saina" tamin'ny aretiny, dia nanandrana nitady fomba hialana tamin'ity monster ity izay nanao fahirano ahy avy tao anaty aho. Ny fahatsapako hevitra dia nanoro ahy ahy fa amin'ireto toe-javatra niseho ireto izay tsy nahomby ny mpampianatra am-bava, ny asan'ny preverbal no famantarana ny fitsaboana manaraka. Marina fa tamin'ity fotoana nandinihako ity dia toa tsy nisy dikany tamiko ny firesahana, tsy mendrika ho fomba fitenenana eo imason'ny fepetra takiana mba hiasa sy hamoahana ny fimonomononan'ny fahafatesana izay nibosesika tao anatin'ny zavamiaina misy ahy.
Ny fisokafako ny fomban-drazana Negro-Afrikana, ary koa ny fiheverako ny fijanonako eo amin'ny "dingana anal" an'ny fampandrosoana fantarin'i Freud dia azo antoka fa nanampy ahy tamin'ny safidiko ny kanto ho toy ny fitaovana manana tombontsoa hanafaka ny tenako amin'ny phobia-ko.
Rehefa mandinika ny sangan'asa kanto afrikanina taloha isika dia mahatsapa fa ny famoronana zavakanto no fomba fanehoana tombony ny Negro-Afrikana. Raha ny marina, ny tanjon'ny Art dia tsy, ho an'ny artista afrikanina, fanehoana plastika natao hanintona ny maso na hanelingelina ny saina. Araka ny efa nolazainay, ideogram io. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fanohanana mivaingana ny eritreritra iray izay vokatry ny fifehezana ny filana mialoha ny teny, eny fa na dia ny famonoana ho faty aza.
Avy amin'ny lovako ara-kolontsaina noho izany dia resy lahatra avy hatrany aho fa ny famoronana zavakanto dia mety kokoa hanalana ny phobia-ko toy izay fifehezana am-bava amin'ny alàlan'ny fanoratana. Nisalasala aho fa ity làlana farany ity, izay matetika ampiasaina any Andrefana ho fitaovana iray "hihoarana" ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny famoronana haisoratra, dia nahomby.
Ankoatr'izay, tsy ny teôria Freudiana ve no mametraka ny fifehezana "anal" ho toy ny fepetra takiana amin'ny lalàm-panorenan'ny lohahevitra sy ny fidirany amin'ny sehatra an'ohatra?
Ary koa, mba hirotsahana amin'ny tolona fanafahana amin'ny dragona nonina tamiko sy nanalavirany ahy, dia nitondrako fitaovana mety hanehoana ny fahatsapako fa malahelo: antsy, fanapahana, tantanana, vato, mpanala, lamba famaohana, jetin'ny rano, farany ny fitaovana rehetra azon'ny eritreritra mampalahelo.
Aleoko ny manao sary hosodoko amin'ny lamba firakotra, izay tsy mety amin'ny famoronana tampoka, mampiasa pastel sy hazokely amin'ny karatra fikororohana aho. Ity fanohanana izay, tsy toy ny lamba kanvas, dia mirona amin'ny fanafihana sy fanovana, ireto hazo miloko azoko tanterahina mivantana sy fantatro amin'ny tarehin-javatra ezahako esorina ireto, ny projet an'ireto eo amin'ny baoritra dia mamela ahy efa ampy hamoahana ahy.
Ny faniriako malahelo dia eo an-tampon'izy ireo rehefa mitondra antsy (maranitra sy tsofa) aho, ny mpanapaka, ny marotoa hanorotoro ny sakelaka miloko, ireo vatokely ary azoko ampiasaina izy ireo handokoana ilay baoritra vita amin'ny varnished, hanoratako azy io, ho manosotra, mamiravira azy, mamiravira sombintsombiny, mandentika azy ary mametraka izany amin'ny siny-drano mba hanoratana ny dian'ireo sadisma tsy voafehy ahy, toa ilay mpanao sary sokitra mainty amin'ny hazo.
Amin'ireto fepetra voafaritra manokana momba ny famoronana ireto, ny fitaovana kanto, ny baoritra banga, dia manana ny dikan'ny toerana fanaovana projet an-tsary-famindra ireo kapila anal voamarina amin'ny fitaovana sary. Ary ny fampiroboroboana ny zavakanto dia lasa fanoharana ny fifanandrinana amin'ny reny phallic.
Ny imagoan'ny reny phallic, izay manakana ny fidirana amin'ny raim-pianakaviana ary mandrara ny fidirana amin'ny saha an'ohatra, dia manerana an'i Afrika mainty.
Mampihoron-koditra, mandripaka, tsy azo ihodivirana, ny fiaviana frantsay Denise Paulme dia nanokana boky mendri-piderana ho azy "ilay reny mitelina" izay nanatontosany tamin'ny teny angano ny tantara an-tsehatra an'ilay lehilahy mainty hoditra tsy mitovy firehan-kevitra amin'ny fifandonana amin'ilay sary an'ny reny phallic = mifandimby mifampisintona ny iray hafa ny mahery fo tsirairay ary mamindra azy, amin'ny fifandonana tsy misy fiafarana.
Ity tolona jamba sy mamoy fo ataon'ny Negro-Afrikana ity, amin'ny fikatsahana famonjena dia nanandrana ny nisambotra azy io koa tamin'ny fomba fijery ara-tantara. Ary naseho taminay fa, nifanesy tamin'ny hatairana sy ny fikorontanan'ny fanjanahana izay nanala ireo rafitra ara-panoharana nentim-paharazana, dia famantarana ny toe-javatra fanjanahantany nampiavaka ny fifandraisan'ny fanjakazakana tsy mizarazara.
Izany no mahatonga anay toa ara-dalàna ho antsika ny mahita amin'ny endrik'ilay reny phallic izay manjaka manjaka ao anatin'ny fanjanahan-tany taloha, ny endrik'ilay "tompon'ny adala" anatiny.
Ny renim-pianakaviana phallic sy ny lahy lahy, ilay raim-pianakaviana mahery indrindra, dia vokatra tsy dia lehibe fotsiny tamin'ny fampidirana herisetra sy fanimbana nataon'ny fahefana fanjanahan-tany.
Noho izany dia tsy tokony hahagaga antsika ny fanahin'ny fiankinan-doha sy ny fitambaran'ny ambany noho ny mpanjana-tany, na dia taorian'ny "emansipation" aza. Ho an'ny sarin'ny tompony anatiny, nampitaina hatramin'ny taranaka fara mandimby, tamin'ny alàlan'ny fanabeazana, dia mitohy ao aminy ny asan'ny fanjanahan-tany sy ny fanavaozana. Ny antony mahatonga ny fifanoherana toetra schizo-paranoid izay manohitra ny fanjanahan-tany ho azy sy ho an'ny hafa dia hita ao amin'ity trauma ity.
Manomboka izao dia eo amin'ny endrika sary an-tsaina sy ny patholojika no maharitra ny fifandraisan'ny Negro sy ny mpanjanatany.
Izany no antony tsy maintsy hametrahana ny fanontaniana momba ny tolona ho fanafahana ny mpanjanatany amin'ny paikady psycho-pathological izay hanambatra ny tombotsoan'ny psychoanalysis kilasika amin'ny an'ireo hetsika kanto mamorona fiteny ary manohana ny fahatsiarovan'ny marary. .
Noho io paikady fitsaboana io izay miantso ny fitsaboana aretin-tsaina sy ny hetsika ara-javakanto mamorona endrika manan-danja izay manohana ny tsy fahatsiarovan-tenan'ny marary, dia ho fanamafisana ny firaisan'ny ego amin'ny fampidirana ny anaran'ny ray izany. , ary hanitatra ny fetrany amin'ny alàlan'ny famoronana izay manome rehareha ny toerana misy ny fanapotehana-jouissance, mba hampiroboroboana ny fisian'ny faniriana hanamboatra.
Ny asan'ny zavakanto avy eo dia nivadika ho valin'ny fandrafetana ireo "taolam-paty" avy amin'ny anaran'ny ray. Izy io dia "sisa tsara tarehy", solontenan'ny raim-pianakaviana. Raha adika ho toy izany sy anatiny, ireo endrika fiteny ireo dia nantsoina mba handrafitra ny korontana anaty ao amin'ny marary ary hampiasana ny fiheverany azy ho lohahevitra eo amin'ny sehatry ny tandindona.
Zirignon GROBLI, mpitsabo momba ny zavakanto